Fonts Serif oo bilaash ah bisha Ogosto | Abuurista khadka tooska ah
Fonts Serif oo bilaash ah bisha Ogosto
Kuwa fiican naqshadeeyayaasha Waxay ka warqabaan in xulashada foomka marka la fulinayo mashruuc ay siman tahay oo ay weliba ka muhiimsan tahay waxyaabaha kale ee naqshadeynta, tani waa sababta keentay in qoraalkan aan ku soo bandhigno sagaal free noocyada serif, si aad ugu adeegsato nashqadaada xigta ama aad ugu darto qoraalkaaga font.
Ilaha aan ku xusayno gudahood waxaad awoodi doontaa inaad hesho dhowr nooc, tusaale ahaan: xarrago, Masaari, qosol, iwm, marka lagu daro culeysyo kala duwan, tusaale caadi ah, iftiin, faalig, geesinimo iyo dhiirranaan dheeri ah, marka laga reebo inay dhammaantood leeyihiin liisanka bilaashka ah ganacsi ahaan iyo adeegsi ahaanba.
Kuwani waa kuwa ugu fiican noocyada Serif ee bilaashka ah
Foomkan Serif waxaa si gaar ah loogu farsameeyay in loogu isticmaalo naqshadaynta tifaftirka. Waxaa laga heli karaa labadaba sanduuqa hoose iyo sanduuqa sare, marka lagu daro lahaanshaha midka ugu weyn tirooyinka iyo astaamaha higgaadinta, oo leh qaab caadi ah.
Waxaa lagu heli karaa qaab OTF ah.
Waa il free, oo ujeeddadiisa ugu weyni tahay in xoogaa casriyeyn ah la keeno ilahaas, iyadoo diiradda la saarayo gooladaha noocyada caanka ah ee serif iyo ku darista qoys dheeri ah tusaalooyin. Waxay ku habboon tahay buugaag, cinwaano waaweyn, boorar iyo waliba walxo xarrago leh.
Qoyska Butler waxay leeyihiin 7 miisaan culeys, 7 miisaan caadi ah, iyo jilayaal 334. Sidoo kale, glyphs-keeda awgeed hagaajinaya luqado kala duwan. Waxaa laga helaa qaababka Webka iyo Desktop.
Ilahaan waxaa loo tixgeliyaa maaha oo kaliya aad loo aqrin karo laakiin sidoo kale casriga ah, xarfahaani waa la heli karaa oo gebi ahaanba waa bilaash, qaab Italic iyo Regular ah. Waxay sidoo kale leedahay nooc buuxa oo ah 16 nooc.
Waa a casri ah farta xarfaha waaweyn, oo leh taabasho casri ah oo aan taxaddar lahayn. Waxay leedahay 88 xarig iyo dhowr jilayaal gaar ah oo gaar ah. Marka lagu daro imaatinka Semi-Bold iyo miisaanka caadiga ah. Waxay leedahay qaab TTF ah.
Waa xarfaha far waaweyn Isticmaalayo, isagoo ku habboon calaamadaha, cinwaanno iyo boodhadh. Qaabkeedu waa TTF.
Waa il aad u xiiso badan oo si fudud loo akhriyi karo. Dhismayaasheeda waxay ku saleysan yihiin hal xariiq oo qalooca waxaana laga heli karaa qaababka WOFF iyo OTF.
Waxay ka kooban tahay a fwebiga masar taasi waxay leedahay 4 pesos oo leh faaluuq, taas oo ah waxaa loo isticmaali karaa in ka badan 40 luqadood kala duwan marka la isticmaalayo xarfaha Laatiinka. Waxay u muuqataa inay ku habboon tahay kaliya cinwaanada laakiin wax kasta oo ay tahay in lagu muujiyo qoraalka.
Kala xisaabtan in ka badan 16 nooc oo kala duwan, oo ku kala duwan inta udhaxeysa Joogtada, Iftiinka, Bold, Italic iyo Extra Bold waana qaab TTF ah.
Waa il dabacsan taasi waxay leedahay shakhsiyad weyn oo waliba gudbisa kalsooni badan, si loogu adeegsado si isku mid ah daabacaadda iyo shabakadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Fonts Serif oo bilaash ah bisha Ogosto
Isbarasho Hordhac ah oo loogu talagalay Adobe Kadib Raadka
Goobaha leh midabada midabka leh ee UI